PAMUSORO PEDU Art sens - mazano eimba nebindu
Art sens iri online repamhepo iro rinopa idzva uye nyowani mazano emukati nekushongedzwa kwebindu.
Isu tinokuzivisa iwe kune masitayirasi mune zvemukati dhizaini uye midziyo, pamwe neazvino mafashoni maitiro ekushongedza kwemba. Isu tinopa mazano anonakidza ekuronga gadheni, kudyara uye kukura maruva. Hatina kukanganwa vabiki, avo vatichazopa mamwe akakurumbira uye anonakidza madhiri.
Isu tichakubatsira iwe nehunyanzvi mazano uye mazano anoshanda.
Project yeimba hombe ine attic, pasi uye garaji
Project yewakanaka-one-imba imba ine vatatu yekurara uye veranda